Inqaku leRedmi 8 Pro yenze ukubonakala kwekhamera yangemva yesine | I-Androidsis
Kubonakala ngathi uXiaomi akazukulinda umjikelo wonyaka omnye oqhelekileyo wokumilisela ezihlangwini zakhe I-Redmi Qaphela i-7 Pro, Oko kukuthi, kunjalo I-Redmi Qaphela i-8 Pro. Oku bekulindelwe kuba inqanaba eliphakathi eliphakathi belibalekile kwezi veki zidlulileyo.
Ngoku bekukho ngefoto evuzayo ethi, ngokucacileyo, yabanjwa kwikhasethi yokurekhoda yenkampani. Kuyo i-smartphone iyabonakaliswa, nangona ingeyiyo yonke. Kuphela yiphaneli yangasemva ebonakalisiweyo, kwaye ibisezandleni zomsebenzisi womntwana. Kodwa kwanele ukuqhubela phambili iinkcukacha ... jonga umfanekiso ongezantsi kwaye uzibonele uyilo, kunye neekhamera ezine zangasemva isixhobo esibonisiweyo.
Njengoko ubona kwifoto engezantsi, ekucingelwa ukuba iRedmi Qaphela i-8 Pro inesistim sekhamera esemva enee-sensors ezine. Ezi zikwindawo ephezulu yesembozo esingasemva kwaye zilungelelaniswe ngokuthe nkqo kwindlu, enesitshixo esiphambili esilinganiselwe ngumgca omhlophe osetyhula. Kwicala lasekunene layo, ecaleni kwayo, kukho isibane se-LED, esingayi kuba lula, kodwa siphindwe kabini.
Inqaku leRedmi 8 Pro ivuza
Unokuqaqambisa isicatshulwa phantsi koseto lweefoto. Nangona kunjalo, into eneenkcukacha apho ayiqondakali, njengoko icace gca. Umfanekiso awuniki ukusondeza kwaye uqinisekise into eyithethayo. Kwelinye icala, ngaphandle kwento yokuba uphawu lweRedmi lukwabhalwe kwiphepha elingasemva, alubonakali ngokucacileyo.
Ezinye zeempawu zeRedmi Qaphela 8 zichaziwe yi-CEO yenkampani
I-aesthetics yeRedmi Qaphela 8 Pro iyafana naleyo ye Redmi K20. Kuhleli kubonakala ukuba umphambili wale smartphone ungachazwanga uza kujongeka kanjani. Nge-29 ka-Agasti siza kuyityhila, eyiyo umhla obhengeziweyo apho kuya kuthi kusungulwe la manqaku matsha ee-smartphones.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Inqaku leRedmi 8 Pro yenze ukubonakala ngekhamera yangemva yesine
Iimodeli ezisibhozo zeHuawei zeHuawei zifumana i-EMUI 9.1 ene-GPU Turbo 3.0 kunye nenkqubo yefayile ye-EROFS